COPAC neMasangano Akazvimirira Zvowirirana Kushanda Pamwe Chete
Chikunguru 07, 2010
Komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, kana kuti COPAC, yaita chisungo chekushanda pamwe chete nemasangano akazvimirira muchirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu pazvinhu zvinofanirwa kunge zviri mubumbiro remitemo.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaMunyaradzi Paul Mangwana veZanu PF, vati vanotarisira kushanda zvakanaka nemasangano aya kuitira kuti chirongwa ichi chibudirire.
VaMangwana vatiwo masangano aya anofanirwa kuburitsa chokwadi chezviri kuitika muchirongwa ichi, kwete kuburitsa manyepo. Vatiwo masangano akaita seNational Constitutional Assembly, ayo ari kupikisa chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva, haabvumidzwe kuongorora chirongwa ichi.
Ukuwo mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira, weNANGO, unoti uchashanda pamwe chete neCOPAC, mukuongorora mafambisirwo ari kuitwa hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebumbiro remitemo.
Vachitaura mushure memusangano nevatori venhau waitwa neCOPAC pamwe chete neNANGO, Chief Executive Officer weNANGO, VaCephas Zinhumwe, vanoti vanotambira zvose zviri mugwaro remashandiro anosungirwa kuti vaongorori vari kumirira masangano akazvimirira vatevedzere, iro rakaburitswa nemapoka maviri aya.
Mashoko atiri kutambira kubva kudunhu reManicaland anotiwo nhengo yeMDC kwaMusikavanhu, VaMathew Gonera, vakapotsa vapambwa svondo rino nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeveZanu PF.
Mutauriri weMDC muManicaland, VaPishayi Mucharuaya, vanoti izvi zvakaitika paRimai Business Centre mazuva mashoma apfuura.
Mutewedzeri wemunyori anoona nezvemabasa ezvematongerwo enyika muMDC, VaMorgan Komichi, vanoti vatsigiri veZanu PF vari kushungurudza nhengo dzebato ravo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZanu PF panyaya iyi.